Mhlawumbe uke waba ngezinye izikhathi uqaphela ukuthi isikhumba ebusweni akuyona nokunwebeka ngakho njengoba ebusheni bakhe. imibimbi Buthule abe kancane ezijulile, futhi ukubonakala akuyona lushelele ngokushesha singathanda. Futhi ngezinye izikhathi ke asiphuthi ngaphambi ukwakheka akunjalo uyazifihla ubudala. Aqala ecabanga ukuguga ... Hawu, lokhu akulona iqiniso - ukuphila kuqala lapho owesifazane neminyaka engu-50.
Lona yobudala lapho izingane etshalwa futhi, ngakho-ke, kwakukhona isikhathi esiningi mahhala ngokwami. Ekugcineni, asihlali ku Stone Age, manje athuthukile ezihlukahlukene amasu ukwakheka. Udinga nje ufunde indlela ukuqapha ukubukeka kwabo ngendlela entsha. Uzobona ukuthi ubuhle akuyona yokuqothulwa! Lokhu kuzokwenzeka kamuva kakhulu - 85, akukho kangcono 90, noma angabe esaba khona lapho izimonyo. Ngakho, ukwenza i-abesifazane engu-50 igxathu negxathu sifunda ukwenza okwamanje!
Iziphi izimpikiswano iminyaka yobudala kakhulu?
Eyes. Basuke ngokuyinhloko ukhuluma ngani ubudala, noma kunalokho, ngaphansi iso izikhwama, imibimbi nokunye. Akukona ngalokho, kunikeza engu komlilo emehlweni, noma kunalokho ukungezwakali kwawo. Ayavuma ke, ozibone abesifazane abasebasha ngaphandle ezinhlamvwini zamehlo akhe? Le ntokazi kalula aphonse iminyaka eyishumi noma amabili, naphezu kweqiniso lokuthi it is kahle yakhiwa futhi ubukeka umxhwele, alunguza ukhathele. Futhi uma owesifazane, zisebenzisa ilungelo yobudala ukwakheka ngemva kweminyaka engu-50, okuyinto ungayeki iminyaka engu-30? Wake wacabanga yini ukuthi bakwenza kanjani lokho? Bamane othanda ukuphila, uzithande, ngakho bheka ephelele njalo, kungakhathaliseki ubudala.
Ngakho-ke, lokhu uzithanda wena oyikho - nazo zonke nemibi, eyaziwa kuphela, kholwa kimi. Phumula, ukudlala ezemidlalo, ithokoze njalo ukuziqinisa nokuba nombono, bese okunye uyolungisa izimonyo. Phela, into kuphela lokho ayikwazi ukulungiswa ngosizo ukwakheka - ukubukeka ukhathele futhi idangele. Ngakho-ke, ucasukile, futhi kubhekwa engu-ngumkhapheli. Okuningi sokulindela okuhle! Kuvunyiwe? Khona-ke ungakwazi ukuqhubeka embuzweni olandelayo. Indlela yokwenza izimonyo amahle ngemva kweminyaka engu-50 ekhaya?
Uma ngaphambili kwakunokwenzeka ukuba ikhiphe ne ungqimba isisekelo powder, manje kubalulekile ukwakha ephelele ukwakheka kwabesifazane iminyaka engu-50. Step by step ulandele izincomo okuphakanyiswe ngokucophelela Fihla uvele kwi isikhumba endaweni encane ephethe tinge brownish, bona ngokukhohlisa isu emhlabeni yobudala bakhe. + Ngakho-ke, kuyoba osetshenziswayo kangcono ngaphambi ukwakheka toning ukhilimu.
Uma kukhona izinkinga eziningi ezinkulu ne nezimagqabhagqabha, isicelo kulezi zindawo ngaphansi base umqondisi. Kwaphela, alungise, nengxenye-heartedly akudingeki, njengoba ngokugcwalisa kuyoba uthuli ngaphezulu. Sebenza nge ibhulashi endaweni enkulu emhlabeni amehlo, umlomo emakhoneni. By the way, funa ithoni ezifudumele isisekelo, njengoba abandayo misa imigqa ezingenanzuzo, futhi ngezinye izikhathi ukucindezeleka. Emva isicelo ukusakaza kahle Tonalka ezilinganisweni, zama ukupenda egumbini okwanele. Ukuze ulawule izinga esekelwe ukusatshalaliswa, libeke ngokwakho efasiteleni - emini akukho okungathatha isikhala sokuqongelela.
Kubalulekile ukuba overdo it, ngokwanele ukuba enze amehlo evulekile, ihlanzekile. Umgomo wakho - hhayi kuphela akha, qiniseka ukukhumbula lokhu. Uma isicelo makeup ezizungeze amehlo, umsebenzi oyinhloko - ukulungiswa kwamaphutha. Wena kumele bahalaliselwe, uma zingekho, khona-ke ungakwazi ukupenda ngokuphepha njengoba inhliziyo yakho ufisa. Kodwa amasu ukulungiswa baqashwe futhi abasha, ngakho musa ukuthatha ngenhla ku-akhawunti ubudala. Umgomo - ukuthi siphakamise amakhona iso, fihla imigqa emihle elibazungezile, ongaboni bude amehlo, ukususa ijwabu leso eyayisondela. Zama ukuchitha izimonyo professional kuphela. Kwathi masinyane owesifazane, engu-50 ubudala, isinyathelo kuzo zonke izigaba, akunzima. Shintsha indlela yakho best!
Zama uma kungenzeka ukusebenzisa imisindo ehlukahlukene kunokuba umbala. imibala Ziningi akudingekile, ungakwazi ukuthenga isithunzi nsuku zonke ezimbili, linanikhulu lema-ngemibala emine. Kuyinto efiselekayo ukuthi ibhokisi isithunzi eyodwa Iphalethi, isibonelo, kusukela beige ukukhanya kuya konsundu, futhi kungaba kusuka grey ukukhanya abamnyama.
emakhoneni Lifted - ekhoneni yangaphandle, isicelo izithunzi amnyama futhi enezimpiko ngase amashiya. On the ijwabu leso kwangaphakathi, isicelo ukukhanya umthunzi. uwina kakhulu ushintsho bushelelezi, ngakho imibala emibili ufane kahle nezinye ibhulashi ngamunye kancane obukhulu.
Ungasebenzisi umsizi kolayini ecacile, kungashiwo ukubopha usebenzisa ithunzi efanayo. Ukuze lo mugqa ukuziphatha ngendlela imicibisholo ku ekhulwini yangaphandle, bese kokulugcobhoza ibhulashi ithunzi, ngepeni enezimpiko. Le nqubo unikeza amehlo inkolo eyayinaso futhi abenze bakhulume bazwakale. ijwabu leso Olusondelayo zingancishiswa e yokwamukela efanayo - swayipha brown ezithambile ipensela umugqa endaweni lapho esibayeni kufanele, bese uhlanganisa phezulu.
Nakuba hhayi Kunconywa ngabantu besifazane abaneminyaka engaphezu 50 ukusebenzisa Mascara awugqinsi, ngezinye izikhathi ke uwina isicelo kakhulu. Kodwa bonke ngamunye. Uma zisetshenziswa ukuthi ukuphila kwabo konke ukuze upende eyelashes egqamile futhi ngokucijile izodlulisa Ushintsho olungcono nesizotha more, uyobheka bloklo. Kwezinye kungase kube umuzwa ukuthi ukhathele noma ugula. Kuyadingeka ukuba afeze makeup abesifazane emva kweminyaka 50, igxathu negxathu, kodwa ikhumbula izintandokazi zabo, imikhuba kanye izici.
"Wayeke wakipita emhlabeni ngaphandle intuthwane eyelashes futhi akukho amashiya" - umsindo ezihlekisayo, akunjalo? Ngaphandle nemengamo amahle phezu kwamehlo yowesifazane yesimanje Awukwazi ukwenza, yamuka kukhona izinsuku Mona Lisa. Okokuqala, manje imfashini, futhi okwesibili, amajika labo abazokwazi okuxhunyanwa zonke izinhlobo imizwa. Ekukhunjulwa iba engaqondakali xaxa, sengathi uyaziqhenya, Ngicabanga. Uma uke njalo omethembayo Ishiya amakhosi salon - abayeki, qhubeka kanjalo! Cishe, uyazi umuzwa lapho amashiya bheka ephelele futhi nice ubunyoninco reflection wakhe.
Manje kukhona inkonzo ezifana unomphela ukwakheka amashiya, ungathatha ingozi, ngeke sibi ngokuqinisekile, ikakhulukazi uma amashiya wakho ezingajwayelekile iyezwakala. Into esemqoka - ukuthola master abanolwazi futhi ukucacisa ifomu elifanele.
amashiya esimnyama is hhayi Kunconywa ngaphandle nje kokuthi Brunette, kangcono ukukhetha onsundu ngokuphaphathekile noma abe grey-black umbala omnyama. Udinga ipensela ebukhali. Qala kusuka yangaphandle umsila kunodeshi imigqa (simulating izinwele), badonswa, baphuma ikhanda emaphethelweni. Kancane smudge ishiya ibhulashi (kufana isixubho elincane).
nentaba Yemvelo emlonyeni ngezinye izikhathi ulahlekelwa imingcele yayo. Yenza isipanji ekhululekile futhi silungise ukushiyeka ukwakheka kwesokudla ngowesifazane engu-50, igxathu negxathu kuqalisa. Zama ukusebenzisa kakhulu okubangela umbala Yiqiniso, kunokuningi okungakhulunywanga ngakho, isibonelo, ukuze ulondoloze isithombe nokunye, kodwa hhayi zonke izinsuku. Khetha pink elithambile, eduze umbala zemvelo. Ipensela wesifunda kufanele kube mnyama lipstick ezimbili shades kwephaneli efanayo. Ngaphezu kwalokho, ungakwazi ukugcizelela umbala lipstick isicwebezelisi. Cishe, ngokusebenzisa izindebe kuphela kuwe futhi yonke into icacile, upende njengenjwayelo, kodwa hhayi ngendlela evusa inkanuko.
Abaningi bakwazi kahle yobudala ukwakheka step by step. Ukuze abesifazane engu-50 kuvesane kube lula, ikakhulukazi uma kusetshenziswa izimonyo kukho konke ukuphila. Izibuyekezo ezinhle ngisho kusukela labo kulonyaka kwadingeka afunde ukwenza-up okokuqala. Abanye abesifazane bathole ukuthi kusuka izimonyo inzuzo double: bona zipendwe ngesikhathi esifanayo senze massage ebusweni, ekuthuthukiseni isikhumba tone.